Intombi yaseAries kunye nendoda uAries - ukuhambelana kwimimiselo ye-zodiac.
ukuhambelana kweenkunzi zeegusha
Iimvakalelo zangempela zinqobe zonke izithintelo endleleni yokwenza ulonwabo. Nangona kunjalo, akuyona into engafanelekanga ukujonga kunye nokuhambelana kwi-horoscope. Iinkwenkwezi ziyakunceda ufunde ngeziganeko ezifihlakeleyo zobume bakho abathandekayo kwaye uqonde ukuba ulindele ntoni kunye nokulungiselela.
Ukuhambelana kwama-Aries: yena kunye naye
Uthando oluhambelana nomfazi onama-Aries Aries lungama-35% kuphela. Ulwalamano lwabo lubonakaliswe ngokunyamezela, inkani kunye namandla okubaluleka kwizinto zombini. Ukuphikisana nomntu phantsi komqondiso we-Aries akenzi nantoni na, uzingelela aze aphele.
Iimpawu zomntu uAries kunye nabasetyhini bafana kakhulu, kwaye ngoko ke abavumelani nje ngokuvisisana nokuxhumana. Ngothando banomdla kunye nomoya.
Ukuhambelana kwama-Aries kunye nezinye iimpawu
Indoda uAries no-Sagittarius bakhawuleza bevalelwa ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, kulungile ukukhumbula ukuba i-Aries ikhanya lula kwaye iphuma ngokukhawuleza. Kwi-Aries umfazi kunye no-Aquarius, ummeli wesini esomeleleyo uhlala elawulwa ngokuvuya, ukuxhatshazeka kunye nesimo sengqondo sokuphila. Nangona umntu esemdala, esi sibini asigxila kubomi bentsapho. Phakathi kweTaurus ne-Aries kukho ixesha elide, azinakwenzeka ukuba abe nemiphefumlo enxulumene kwaye iya kuguqulwa ngokupheleleyo. Ibhinqa ngamawele omntu uAries. Le ncwadana ekhanyayo kwaye enomdla.
Imanyano yowesifazane wase-Aries kunye nendoda yeCarcer ayiqhelekanga. Amanqwelana awanamdla, angathathi hlangothi kwaye ancibiliki. I-Horoscope yokuhambelana kwamadoda ase-Aries kunye ne-Scorpio besetyhini ithi umfazi ufumana indoda ehloniphekileyo. Olu dibana lweempawu ze-zodiac lugqithisela phambili umanyano onamandla, onomdla kunye onamandla. Indoda kaLevi iyakuthanda ukukhanya kunye namandla amakhulu amantombazana ase-Aries. Ukuziphatha okuthakazelisayo, imbeko kunye nokumomotheka. Ama-Aries kunye ne-Scorpio-olu nxu lumisela phambili umanyano onamandla. U-Aquarius no-Aries baphelelane. Zizinto zobuntu eziqinileyo kunye ezisebenzayo. Amadoda phantsi komqondiso we-zodiac Aries azimisele, anesibindi kwaye avuya. Zizo ezi mpawu ezenza umdla okhangayo kunye nococekileyo weLibra. Umanyano wabo unokwenzeka, kunye nokuthandana komnye nomnye.
Isibini apho ummeli wesigxina esisisiseko sabantu sisifo seK cancer, kwaye umfazi uAries, unethuba lokuphumelela ukuba okokuqala, kuphuza kakhulu, kuvelisa emva kokunyamezela, ukuphumla nokunyuka phambili kwe-Aries. I-Capricorn kunye ne-Aries-ukuhambelana okungavamile. Umtshato uya kwenzeka xa kukho iimvakalelo ezinyanisekileyo kunye nokwamkelwa kweempazamo zomnye. Phakathi kwentombazana i-Aries kunye ne-Maiden, kunokwenzeka ukuqonda iingenelo kunye nokuseka ukuqonda. Amabhinqa anama-Aries acingelwa njengenye yeembini ezonwabileyo. Indoda yase-Aries kunye nomfazi waseTaurus - inqanaba lokuhambelana kubonisa ukuba banethuba elihle lokudala umtshato ophumelelayo kunye onomdla. I-Pisces ne-Aries inokudala ukusebenzisana okuvelisayo kunye nokusisigxina apho uAries yindoda.
IHoroscope yeAries 2014
Unyaka uya kuba nzima kuba nayiphi na imeko awukwazi ukuzithengisa kwaye unganqikaza ixesha elide. Misela ngakumbi! Ukunyakaza kunye nokuphucula ukuzimela kukunika ithuba lokufezekisa kuzo zonke iindawo. Uthando lwe-horoscope kumntu u-Aries, uthembisa ukudibanisa nesicatshulwa sesibini, mhlawumbi ukudalwa kwebini. Iintombi ze-Aries zeenkwenkwezi zithembisa abantu abanomdla kunye neziganeko ezivuya.
Indlela yokunceda amehlo: buyisela umbono ngendlela efanelekileyo nefanelekileyo
Unokukhusela njani umntwana kumaphambuki?
Ukutya okunceda ukulahlekelwa isisindo
Kutheni intombazana iphupha?
NgoNovemba omnandi: apho uya khona ukuphumla ngenyanga yokugqibela yasekwindla
I-dessert yeedarder nge-raspberries